Sooyaalka sekularnimada bulshada Somaliyed! – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Sekularnimda xiligii dhagaxa.
Intaan u’dhaadhicin nuxurka iyo saldhiga sooyaalka sekularnimda bulshada Somaliyed, waxaa haboon in marka hore faaqidno sooyaalka sekularnimadii ka jirte bulshoyinkii ku noolaa aduunkii hore.
Hadii dhibicda kor ku xusan ka gudubno, waxaa lama horaan noqoneysa in sheekada ka bilowno in mereyahan sida kubada u’dhisan, kuna meeresta udub-dhaxaad aan muuqan, weligii iyo alahiina qoraxda ku dul-wareega , ee Somalida magac ahaan ula baxde “dhulka” anagana dushiisa ku noolnahay, da’ahaan lagu siyaaqa inuu jiro 4.5 billion dabshid.
Sidoo kale, noloshan guud ee hada dhulka ka jirta da’deeda waa lagu qiyaasa 3.8 billion dabshid.
Hase-ahaatee, Jiritaanka noolaha lagu magacaabo “dad” noocisa synis ahaan ku magac dheer “Sapiens” ee bulshooyinka dunida maanta ku nool dhamaantood ku abtirsadaan, jiritaankiisa waxaa lagu qiyaasa inta u dhaxeysa 200, 000, ila 300, 000 dabshid oo kelia.
Hadaba, awooweyaashii hore ee dadka maanta dunida ku nool, halgankooda ku aadanaa badbaabinta jiritaanka nolosha dadnimo waxuu soo mare xiliyo tiro badan oo aad iyo aad ukala gedisan.
Xiliyadaa kala gedisan waxaa ugu da’weyn xiliga lagu macaboo xiliga dhagaxa (stone age) waana xiliga cashirka maanta ku lafa-guri doono.
Runta jirta waxaay tahay, in qofka iyo dadkii noola xiliga dhagaxa ahaayeen dad waxba ku toornen, “insignificant people” waayo, nasiib daro, dadkaas gacanta ugu ma jirin awood iyo agab/ qalab ay ku maareeyaan cimilada naxarista daran ee dhanwalba aga heerneed.
Marag-madoonto waxaa ah, in dadkii noola xiliga dhagaxa ahaayeen dadk waaqan oo ku hoyda jiritaankoodana ku ilaaliya godad mugdi ah oo habeenkii ayaga, caruurtoda iyo dumarka xaamilada ah ugu soo geli-jireen ugaarsadeyaasha gudcurka ku ugaarsata, masas, halaq, cayayaan sun iyo jeermis xambaarsan, iyo weliba daadka biyaha roobka!
Taa waxaa ka daran, in dadkii waaga jire, qeeb hoose ka ahaayeen mareega waalan ee loo yaqaan “mareega cuntada” ama “food chain” eek u dhisan xeerka loo yaqaano “xeerka duurka” ama “jungle law” oo micnahiisa yahay in noolaha xoog-badan marwalba raashin ka dhibto noolaha tabar-daran.
Taa micaheeda waxuu yahay, in dadkii waaga jire ahaayeen “ugaar” waxaana uraagsan jire hilibkoodana ku qadeen jire ugaarsadeyaasha xooga badan ee mareega cunta qeebta sare aga jira sida libaaxa, shabeelka, harmcadka, yaxaaska, waraabaha iyo dhamaan nafleyda looyaqaan “predators”.
Tusaale ahaan: mar kasta oo si kadis ah koox ka mid ah dadkii xiligaas noola aga soo hor-baxaan xeen waraabe ah, ama libaax, sheekada marwlaba waxaay ku dhamaan jirte in dadka cagaha wax ka dayaan, qof kastana dhinac u baxsado, kan liitana libaaxa ama waraabaha ku qadeyo, tarankiisana tirmo, kuwa dheereyana badbaadan tarankoodana sii socdo.
Taa micnaheeda waxuu yaahy, in xiilada iyo awooda keliya ee dadka waaga noola gacanta u jirte eheed in jiritaanka noloshooda baxsad ku badbaadiyaan.
Taa micnaheeda labaad waxuu yahay, in dadkii xiliga dhagaxa noola tabar ahaan iyo xiilad ahaan wax badan dhaamin dameer-farowga maanta libaaxa, iyo shabeelka ku ugraasadaan banka uu ka baxo cowska loo yaqaan savanna ee dalka Kenya iyo Tanzania.
Dhanka kale, dadka sidaa u’tabaaleysnaa jiritaanka noloshooda waxaay ku ilaalin jireen cunida miraha aay ka gurubsan jireen geedaha hoostoda iyo cagaarka dhulka ka baxa.
Intaa waxaa u’dheered in aay adeegsanjireen dhaxaan yaryar oo babaca gacanta lagu qaadi karo.
Dhagaxyada noocaas ah, waxay u’adeegsajireen in aay ku jibaan lafaha waaweyn ee raqada nafleyda libaaxa ku qadeye, ama nafka iskiisa u’bakhtiye ee waraabaha helibkiinaas ku casheye ayagoo u’dan lahaa in lafahaas kala baxaan dhuux jirkoda brotiin siiya.
Xiligaas ayuu ahaa xiliga dadka si aad ah ugu baahnayeen nabi iyo rasuul ka fududeya saxariirta halganka jiritaanka, heerka noloshoodana xooga sare uqaada.
Hase-ahaate, nasiib daro, taa ma dhicin, sida aawigeedna halganka saxariirta xambaarsanaa ee dadka nolosha kula jireen, gebigiisa waxuu ahaa halgan sekulaar ah oo ku dhisan adeegsiga maanka iyo waayo-aragnimda aay ka lisaan nolo maalmeedka, ayaagoo in-naba kaashan gaargaar cirka aya yimid.
Goordhow filo qeebta labaad ee cashirkan.